कसरी र कतिमा बन्छ पोर्न फिल्म ? यस्तो छ रोमाञ्चकारी तथ्यहरु - inaruwaonline.com
कसरी र कतिमा बन्छ पोर्न फिल्म ? यस्तो छ रोमाञ्चकारी तथ्यहरु
प्रकाशित मिति: आइतबार, कार्तिक २२, २०७२ समय: ११:३०:३७
वयस्क चलचित्र दुनियामा धेरै मानिसले हेर्छन् तर वयस्क चलचित्रभित्रको संसार कस्तो हुन्छ कमै मानिसलाई मात्र थाहा छ । हालै केहि पोर्नस्टार र निर्माताहरुले पोर्न फिल्मभित्रका धरै रोमाञ्चकारी तथ्यहरु उजागर गरिदिएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल रेडिटमा प्रयोगकर्तालाई जवाफ दिने क्रममा उनीहरुले यस्तो खुलासा गरेका हुन् । यसमा टिप्पणी गर्ने एकजनाले सोधेका थिए, पोर्न फिल्मभित्रको साँच्चै अनौठा कुराहरु के के छन् ? उनको प्रश्नमा झण्डै तीन हजार जवाफ झरे, तीमध्ये केहि पोर्न इन्डस्टीमा आवद्ध मानिसहरुको थियो ।
सबैभन्दा रोचक तथ्यहरु उजागर गरेका थिए केल्भिन डेह्याजले जो एक भूतपूर्व फिल्म निर्माता हुन् । उनले पोर्न फिल्म सित जोडिएका थुप्रै रमाइला तथ्यहरु उजागरगरे । डेहयाजका अनुसार पोर्न फिल्ममा नायिकाहरुको चरमोत्मर्ष प्राय नक्कली हुन्छ । उनले यो पनि भने कि समलिंगी भूमिकामा खेल्ने पुरुषहरु वास्तविक जीवनमा भने स्ट्रेट (विपरितलिंगीप्रति झुकाव राख्ने) नै हुन्छन् । धेरैजसो समय क्यामराको अगाडी केटीहरुले देखाउने उत्तेजना नक्कली हुन्छ । प्राय वास्तविक जीवनमा पनि आपसमा निकट रहेकाहरुलाई ब्लु फिल्ममा जोडि बनाइन्छ । उनले भने ।
पोर्न उद्योगको सबैभन्दा रोचक पक्ष के छ भने अरु क्षेत्रमा पुरुषले गर्ने कमाई महिलाको भन्दा बढी हुन्छ तर पोर्न उद्योगका महिलाले पुरुषले भन्दा कयौंबढि कमाउछन् । एकजनाले लेखेका छन्ः जून दृष्यका लागि महिलाले३ हजार डलर पाउछिन्, त्यसमा पुरुषले ५ सय डलर मात्र पाउछन् ।
यस्तै रमाइलो कुरा के खुलासा भएको छ भनेप्राय पोर्न फिल्मका सुटिंग कुनै स्क्रिप्ट विना नै गरिएको हुन्छ । निर्देशकको सोच अनुसार उनीहरुले एक्सन दिन्छन् र डायलग पनि स्पटमै जन्माइएको हुन्छ । पोर्न फिल्मको सुटिंग झण्झटिलो पनि हुन्छ । एउटै सिनको लागि घन्टौंसम्म लाग्न सक्छ । नायकलाई सिकाउने क्रममा निर्माता वा निर्देशक आफैंपनि सेक्समा संलग्न भइरहेका हुन्छन् ।
कलाकारहरुका लागि पोर्न फिल्म सुटिंग गर्नु पनि एउटा काम जस्तै हुन्छ । पुरुषका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति आवश्यक समयमा उत्तेजना नहुनु हो । यसका लागि उनीहरुले विभिन्न खाले औषधी सेवन गर्दछन् । महिलाहरु चाहिँ उत्तेजना नभए पनि उत्तेजित व्यवहार प्रदर्शन गरेर आँखामा छारो हाल्छन् ।
पोर्न स्टारहरुमा एचआइभि एड्सको सम्भावना आम मानिसभन्दा न्यून हुने पनि पाइएको छ । किनभने यौनसम्वन्धमा उनीहरु सँधै सचेत र सुरक्षित रहन्छन् । अरु क्षेत्रमा जति अनुभव छ त्यति नै बढि पारिश्रमिक दिइन्छ । तर पोर्न उद्योगमा कम अनुभवि वा अनुभवहिनले बढि पारिश्रमिक पाउने सम्भावना हुन्छ, विशेषगरी केटीको हकमा ।श्राेतः विभन्न अनलार्इन